Abakhiqizi Bezinto Zokuhlobisa & Abahlinzeki - Ifektri Yezinto Zokusebenza Zase China
I-Aluminium Silicate Silica Mullite Fire Brick Cement Kiln Refractories Matching Lining
Ikhwalithi ephezulu ye-sil Refon yezinto ezibonakalayo ze-silicon carbide ramming mass for fire lining
I-Magnesium aluminium spinel evuselela isitini yokushiswa ngezitini zomlilo ezilinganayo
Kiln izitini zomlilo Isingeniso
Izitini ze-Magnesia alumina spinel ziluhlobo lwezitini eziqabula i-alkali, ibhulokhi usimende kanovolumu nayo ingakhiwa njenge-spinel, eyenziwa ibe yi-amorphous Refractory esetshenziselwa ukwakheka okuhlanganisa nokwenziwa kwangaphakathi. Inqubo yokukhiqiza yezitini eziyimagnethi eyisihluthulelo ngokuyinhloko isesigabeni nenqubo yokukhiqiza yezitini ezijwayelekile ze-magnesia, Nokho, lelo nalelo granule elisengxenyeni yokuhlangana lakhiwe ngesipinisi esenziwe sintered noma isipinashi esakhiwe ngogesi, noma ingxube yalokhu.
I-Dry Ramming Mass Magnesia Powder Refractory Ye-Midiate Channel Induction Furnace
Isingeniso se-Magnesia Ramming Mass Isingeniso
Ukuhlanganiswa kwe-Magnesia ramming kuwuhlobo lwe-alkali amorphous Refractory okwenziwa nge-elektrogus fused magnesia noma i-sintered magnesia njenge-aggregate, kanye ne-superfine powder additive kanye ne-ejenti ebopha.
Isithando sikagesi se-arc heli ephezulu ye-alumina refractory iyisisekelo
Isithando sikagesi sibuye sibizwe ngokuthi isithando sikagesi se-arc, okuyisisetshenziswa sensimbi esenza i-arc kagesi phakathi kwengxenye kagesi eyeqile kanye nezinto zokubasa zomlilo njengomthombo wokushisa. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuncibilikisa insimbi. Uhlobo lwensimbi nemishini yokusebenza, usayizi wesithando somlilo ngogesi unquma isakhiwo sangaphakathi saso, isithando sikagesi ngokuvamile senziwa ngothango lwesithando, udonga lomlilo, uphiko lomlilo kanye nomkhombe wokuphonsa, Namuhla sizokhuluma ngesichasiselo esetshenzisiwe esiqongweni isithando sikagesi sereferensi yakho.
Induction Electric Furnace Refractory ulayini Magnesia Ramming mass mass
I-Refractory Magnesia Ramming mass ezibonakalayo iyindlela yohlobo oluthile lwepulasitiki ephansi noma ayinayo i-plastikiity ye-monolithic Refractories, yenziwe nge-aggregate aggregate, i-powder kanye ne-binder eyenziwe ngokulingana okulinganiselayo i-SongSanZhuang, kusho ngendlela yokulwa nephawundi eliqinile.
Izinto zokuphinda zenziwe kabusha zeMagnesia Gunning zikagesi kagesi
Izinto zeMagnesia Gunning zisebenzisa i-Magnesia esezingeni eliphezulu kanye ne-MgO-Cao zihlanganisa njengezinto eziphambili, ngokufaka izengezo ezibophayo, uchungechunge lokuxubha ngezibhamu lwe-BOF.
Inzalo eyenziwe yasebenza ngaphambili yensimbi ye-slag yokucola i-ladle yensimbi
Lo mkhiqizo unomsebenzi ophakeme we-desulphurization and deoxidization. Kunganciphisa i-suifide ne-oxysulfide ngensimbi encibilikisiwe kuya ezingeni eliphansi kakhulu. Inomsebenzi wokufakelwa futhi ongela ukufakwa okungekhona okwensimbi. Ukusebenzisa lo mkhiqizo kungasiza ukuthuthukisa ikhwalithi kanye nokuzuzwa komkhiqizo wensimbi.
I-ladle Aluminium magnesium Refractory castable castable
Le ladle isetshenziselwa izinsimbi zensimbi nezinsimbi zokwenza amanzi okusansimbi nokuphonsa ngaphambi kwesithando sokuzwa, isithando sikagesi noma isiguquli. I-Refractory castable njengoba i-ladle ye-ladle ingathuthukisa ukusetshenziswa kwe-ladle futhi yandise impilo yensiza.